Mmegharị niile anyị nwere mgbe anyị na-egwu vidiyo na YouTube | Gam akporosis
Ekele maka mmegharị ahụ ọhụụ YouTube webatara anyị ga-egosi gị mmegharị aka nke ị nwere ike ịnyagharịa na vidiyo na nnukwu ikpo okwu anyị nwere na ekwentị anyị.
A na-emelite YouTube ka ọ dị ọhụrụ taa na na bụ onye ọzọ karịa ime otu ala wepu exit ihuenyo zuru ka ọkọlọtọ interface. N'ihi ya, ọ dịghị oge dị mma karịa ugbu a karịa igosi gị mmegharị 4 ị nwere n'aka gị iji melite ahụmịhe nke iji ngwa a na gam akporo.
1 Ogbughari ka ịpụ na ihuenyo zuru
2 Ngosi aka ekpe ma ọ bụ aka nri ka ịgbanwee n'etiti vidiyo
3 Pịa ugboro abụọ iji laa azụ ma ọ bụ gaa n'ihu na vidiyo
4 Ngosipụta aka iji lelee vidiyo ndị metụtara ya na ihuenyo zuru oke
Ogbughari ka ịpụ na ihuenyo zuru
Omume kacha ọhụrụ nke YouTube na-ahapụ anyị mee ka mmadu mechie vidiyo na anyị na-ahụ wee si otú ahụ gaa na ọkọlọtọ interface. Anyị nwere ike iji mkpịsị ugodi belata video, ma ogbugbu bụ nnọọ ihe kensinammuo na oge anyị na-eji ya, ahụmahụ enweta nkwanye dum.
Na ọbụlagodi mgbe anyị na-anọghị na ihuenyo zuru oke na-ekiri vidio ahụ, mgbe anyị na-eme mmegharị ahụ wedata vidio anyị na-ele, na-enyefe ihuenyo ka ị nwee ike ịchọ nke ọhụrụ ma chọpụta ọwa ndị ọzọ na-atọ ụtọ; karịsịa nke anyị si Androidsis jiri vidiyo dị egwu dị ka egwuregwu kacha mma.
Ngosi aka ekpe ma ọ bụ aka nri ka ịgbanwee n'etiti vidiyo
Ọ bụrụ na anyị na-ahụ vidiyo ndị nwere autoplay agbanwuru ma ọ bụ ndepụta ọkpụkpọ playback nke ndị yiri ka enweghị ngwụcha, anyị nwere ike ịgagharị aka n’aka nri iji gaa vidiyo ọzọ. Ọ bụrụ na anyị emee mmegharị ahụ n’akụkụ nke ọzọ, aka ekpe, anyị ga-alaghachi na vidiyo gara aga.
Uno nke isi ihe omuma a bụ na ngwa YouTube na-echeta nke abụọ nke ị nọrọ na vidiyo gara aga, yabụ na-eburu gị ya mgbe ịlaghachi.
Pịa ugboro abụọ iji laa azụ ma ọ bụ gaa n'ihu na vidiyo
Ọzọ mmegharị ahụ kachasị mkpa mgbe ị na-egwu vidiyo na uche ka anyị laghachi nụ ọzọ ma ọ bụ na-ekiri na iri nke abụọ oge oghere. Site na ndabara ị nwere ike pịa otu n'ime akụkụ nke vidiyo ịlaghachi azụ ma ọ bụ gaa 10 sekọnd. Ọ bụrụ na anyị emee ya n'akụkụ aka ekpe ọ "na-adaghachi" azụ ma ọ bụrụ na anyị eme ya n'aka nri anyị na-aga n'ihu sekọnd iri.
na iri sekọnd nwere ike gbanwee site na ntọala iji mee ka o doo anya ma ọ bụ mee ka sekọnd iri ahụ pụta. Ọzọ nke dị oké mkpa mmegharị na-agbakwụnye a oké ọrụ ahụmahụ anyị mobile iji na-akpali ngwa ngwa site na vidiyo na-enweghị "ọgụ" na playback ahịrị.
Ngosipụta aka iji lelee vidiyo ndị metụtara ya na ihuenyo zuru oke
Ngosipụta ọzọ dị ukwuu na nke ahụ nwere njikọ vidiyo ndị ahụ metụtara YouTube na-ewetara anyị nke ọma. Mgbe anyị na-ekiri vidio na ihuenyo zuru oke ma anyị enweghị oke ọchịchọ iwelata vidiyo ahụ iji hụ vidiyo ndị yiri ya na YouTube na-egosi, anyị na-eme mmegharị anya.
Este ogbugbu site na na-eweta n'ime echiche a ọkara transperent oyi akwa n’ime ya na-egosi anyị nhọrọ ole na ole vidio metụtara nke anyị na-ekiri. Ọ bụ ezie na vidiyo ahụ na-aga n'ihu na-akpọ anyị nwere ike ile anya na ndị metụtara ya. Zuru oke mgbe anyị na-ege egwu ma anyị chọrọ isiokwu metụtara ihe a na-akpọ, yana ịchọpụta egwu ọhụrụ ma ọ bụ vidiyo metụtara ọdịnaya a na-akpọ.
Ọ bụrụ na anyị emee ngosipụta ala, anyị ga-ezobe vidiyo vidiyo ndị metụtara ya ọzọ wee si otú a na-egwu vidiyo ahụ. A usoro mmegharị iji chịkwaa vidio vidiyo na YouTube yana ịga n'ihu na ndị na-esonụ. Ọ bụrụ na ị maghị onye ọ bụla n'ime ha, nwaa ha n'ihi na ha ga-enye gị ohere ịnweta ahụmịhe nke ikekwe ị maghị; otu ihe na-eme na desktọọpụ na ngwa ngwa ngwa ngwa na azụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Etu esi eme mmegharị na vidiyo anyị na-egwu na YouTube
Anyị nwalere GRID Autosport Online Multiplayer